george charamba on News24
ARTICLES RELATING TO GEORGE CHARAMBA
Zimbabwe's vice president is being treated in a South African hospital for the effects of a bomb blast targeting Zanu-PF leaders in June, a report says.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa’s silence amid continued accusations by opposition leader Nelson Chamisa that he rigged the July 30 elections is not a sign of weakness, his spokesperson has reportedly said.
Zimbabwe's presidential spokesperson is ruling out a state of emergency after an explosion at the president's campaign rally that state media has called an assassination attempt.
An aide to former Zimbabwean president Robert Mugabe has revealed how the nonagenarian desperately tried to reappoint his ex-deputy at the height of massive street protests in November just before he stepped down.
The Zimbabwean government has reportedly withdrawn ex-first lady Grace Mugabe's state security detail, with most aides formally assigned to her being "recalled and reassigned".
The Zimbabwean government has reportedly said that Vice President Constantini Chiwenga is recovering well at a South African hospital where he is receiving medical treatment.
The Zimbabwean government has reportedly dismissed claims by the opposition that the Movement for Democratic Change leader Nelson Chamisa holds the keys to the current economic problems affecting the country.
President Emmerson Mnangagwa has been fighting off "a bad cold", hence his use of medication, his spokesperson says, after pictures of the president taking pills at a rally went viral last week.
Zimbabwe's presidential spokesperson is ruling out an election delay or a state of emergency after an explosion at the president's campaign rally that state media has called an assassination attempt.
Zimbabwean former war veterans minister Tshinga Dube has reportedly described ex-president Robert Mugabe as a "bitter, senile old man", who was absolutely "intoxicated by power, hence his failure to accept that he was no longer president".
Robert Mugabe's ex-spokesperson has revealed how the former president was told in November that he could face the same fate as the late Libyan dictator, Muammar Gaddafi if he refused to step down.
President Jacob Zuma says his Zimbabwean counterpart has given him assurances that former president Robert Mugabe will be looked after as an "elder".